Adeegsiga Maaskarada, Dhib iyo Dheef | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Mawliid Axmed Xassan — May 23, 2020
Waa maxay maaskaradu(face mask)?
Maaskaradu waa mid ka mid ah sahayda caafimaad ee daboola afka iyo sanka, ujeeddada isticmaalkeeduna waa ka hortagga gudbinta dhibcaha ay ka buuxaan fayrasyada iyada oo loo marayo nidaamka neefsashada qof ilaa qof kale.
Goorma ayey waajib tahay in la xidho maaskarada.
Madaxda hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO, ayaa soo jeediyay in aanay dadku xidhan masarka afka lagu xidho, marka laga reebo dadkan soo socda oo ay tahay waajib inay xidhaan maaskarada:
Qaf qaba cudurka corona fayras
Shaqaalaha caafimaadka ee latacaalaya xanuunka
Qof daryeelaaya una adeegaaya qof qaba xanuunka.
Qof looga shakisan yahay xanuunkan, ama leh qufac iyo hindhiso badan.
“Ma jiro daliil muujinaya in uu faa’ido leeyahay in dadkoo dhami xidhaan masarka afka iyo sanka”. waxaana suurta gal ah qofka caafimaadka qaba hadii uu aad u isticmaalo maaskarada inuuba ka qaado xanuun halkii uu islahaa ha kaa horjoogsado.
Qaabka ugu haboon ee loo adeegsado maaskarada(face mask).
Ka hor inta aanad xidhan maaskarada, si fiican u nadiifi gacmahaaga adoo adeegsanaaya saabuun iyo biyo.
Ka eeg maaskarada wixii cilado ah sida inay jeex jeexan tahay ama xadhig ka maqan yahay. Tuur haday ciladahaas yeelato.
Afkaaga iyo sankaaga ku dabool maaskarada oo hubi in aysan jirin wax dalool ah oo u dhexeeya wejigaaga iyo maaskarad.
Ka fogow taabashada maaskarada inta aad isticmaalayso; haddii aad sidaas samayso, gacmahaaga ku nadiifi aalkolada gacmaha ama saabuun iyo biyo.
Waxa jira dad badan oo hoos ugu soo dejiya maaskarada sanka, dibna u soo celiya waqti ka dib, taas oo macnaheedu yahay haddii fayras ku yaal dusha sare in aad si toos ah ugu wareejinayso sankaaga, waana in aad had iyo jeer ku ilaalisaa sanka dushiisa ama gadhka.
Maaskaradu hadii ay qoydo ama ay wasakh soo gaadho si dhakhso ah ugu badal mid cusub, tii horena dib ha u isticmaalin.
Habka ugu wacan ee la iskaga saaro(bixiyo) maaskarada.
Dhaq gacmahaaga ka hor intaadan iska bixin maaskar
Ha taaban maaskarada (qaybta ka sarraysa sanka iyo afka). Waxa laga yaaba inay wasakh
Si aad iskaga bixiso maaskarada ka soo saar gadaal, hana taaban wajiga hortiisa. isla markiiba ku tuur qashinka adoo taaban qaybta dhexe.
Ka dibna si fiican u nadiifi gacmaha, kuna dhaq saabuun iyo biyo.
Fadlan Xusuusnow: Haddii aad isticmaalayso maaskarada marada ka samaysan ee dib loo isticmaali karo, dhamaadka maalinta, si fiican u dhaq ama Ku dhaq mashiinka dharka dhaqa adoo adeegsanaaya biyo kulul.
Waxa jira noocyo badan oo maaskarooyin ah waxaana ugu muhiimsan:1. Surgical masks Maaskarooyin ka qalliinka waxa la isticmaala hal mar. Maaskarada noocan ah wuxuu bixin karaa oo keliya ilaalin xaddidan, waxay ka hortagaan dhibcaha waaweyn ee ka yimaada qufaca ama hindhisada qofka jiran, Mana xakamayn karaan walxaha yar yar iyo unugyada micro-sidaha ah sida fayraska. 2. N95 respirator masks maskaradan ayaa si adag u daboola wejigaaga. Waxayna shaandheeyaan 95% ama in ka badan oo ka mid ah walxaha yaryar ee hawada. Noocan waxaa si ballaadhan u isticmaala dhakhaatiirta iyo xirfadleyda caafimaad, sida kalkaaliyayaasha caafimaadka, kuwaas oo xidhiidh toos ah la leh bukaanka.
Infection Preventionist Rosine Angbanzan, MPH (March 2020)
W/Q: Mawlid Axmed xassan (Mawlid Qanciye)
Tags: Adeegsiga MaaskaradaDhib iyo Dheef
Next post Maskaxda Bini'aadamku Waa Hoyga Il-baxnimada
Previous post Xidhiidhka Afkaarta iyo Bay'adda